Malunga nathi-TOPFEEL Pack CO., LTD
TOPFEEL Pack CO., LTDngumenzi oqeqeshiweyo, okhethekileyo kwiR&D, owenza kunye nentengiso yeemveliso zokupaka izinto zokuthambisa. Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya ibhotile ye-acrylic, ibhotile engenamoya, imbiza yekrimu, ibhotile yeglasi, isitshizi seplastiki, isasaza kunye nePET / PE ibhokisi, iphepha lephepha njl .nobuchule bobuchule, umgangatho ozinzileyo kunye nenkonzo yabathengi esemgangathweni, inkampani yethu iyonwabela ukudumisa okuphezulu phakathi kwabathengi.
(1) -GMP indibano yocweyo.
(2) -60000 yeemitha zomsebenzi wevenkile kwindawo yevenkile.
(4) -ISO 9001: 2008, SGS, iminyaka eli-10 yokuQinisekiswa kweGolide.
Umxholo we-TOPFEELPACK uthi "Abantu banotyekelo, abafuna ukugqibelela", asiboneleli ngazo zonke iimveliso zabathengi ezilungileyo kunye nezixabisekileyo kuphela, kodwa nenkonzo eyenzelwe umntu. Ngobuchule obuqhubekayo bobuchwephesha bokuhambelana neemarike eziguqukayo zokupakisha izimonyo, sinamathisela ukubaluleka kokusebenza kweshishini kunye nomfanekiso opheleleyo wemifanekiso, sithatha ithuba lamava otyebileyo ekuyileni nasekwenzeni izikhongozeli zezithambiso, sizama konke okusemandleni ukwenza yonke into igqibelele ukwanelisa izicelo zabathengi .
Iimveliso zethu zithunyelwa ngaphandle eMelika, eYurophu, e-Australia nakumazwe amaninzi kuMzantsi mpuma weAsia. Sinegama elihle lokushishina kwaye sijonge phambili ekwenzeni ikamva elingcono kunye nawe.
I-topfeelpack ikwakhona inokubonelela ngenkonzo ye-OEM / ODM yobungcali, Singakwazi ukuyila iipakheji, ukwenza ukubumba entsha, ukubonelela ngokuhombisa ngokwezifiso, iilebheli kunye neebhokisi zemibala engaphandle. Ngazo zonke izisombululo zokupakisha izinto zokuthambisa ukunceda ukuqaqambisa uphawu lwakho, yongeza ixabiso lemveliso kwaye ugcine iindleko. Ukufakwa kwezinto ezintsha kuyilula yokuthengisa.
Siqale umxholo "wezisombululo zokupakisha izimonyo" ukubonelela ngeemveliso eziphezulu kakhulu kunye nenkonzo yokufakelwa "yokumisa".